Kwemakore gumi, ndanga ndiri pachangu ndichigadzira tsika uye ndakaburitsa plugins, ndichigadzirisa nekugadzira madingindira etsika, uye kugadzirisa WordPress kune vatengi. Chave chiri chinotenderera uye ndine maonero akasimba kwazvo nezve kumisikidza kwandakaita kumakambani makuru uye madiki.
Ini ndanga ndichitsoropodzawo vavaki - plugins uye madingindira anogonesa zvisina kudzivirirwa kugadziridzwa kune saiti. Ivo kubiridzira, kazhinji vachiwedzera zvakanyanya saizi yemapeji ewebhu saiti uchidzora saiti zvakanyanya. Rakawanda rebasa ratinoita patinotora basa rekusimudzira webhu kune vatengi ndere kubvisa maridzi uye in-line kodhi iyo isingoregedze saiti pasi chete uye zvakare inotadzisa kugona kwekambani kuita shanduko kune yavo saiti.
Kubva pakuvaka saiti yekutanga yeAvada, ndanga ndichishandisa uyu theme kune vese vedu vatengi. Uye, ini pakupedzisira ndakagadzirisa yedu DK New Media saiti futi. Tarisa uone kunaka kwaro - uye zvaive zvisingaite nyore kuvaka uchinyatsoteerera.
Iwo marongero anowanikwa kuburikidza nemusoro wenyaya uyu haaperi, nemazana ezvinhu uye kugona izvo zvinongoita kuti zvive zviroto zvekushandisa. Ini ndinonyanya kuda kuti ndinogona kusevha midziyo uye zvinhu zvekushandisa zvekare pasirese pane mamwe mapeji uchishandisa iyo Fusion Builder. Iyo yakanaka peji anovaka system inogadzira CSS faira-inotungamirwa marongero mukati mesaiti pane inline mega mapeji.